Kudanana Nemumwe Munhu Ane Kushushikana: 4 Zvinhu Zvekuita (Uye 4 KUSAITA) - Ukama
Kudanana Nemumwe Munhu Ane Kushushikana: 4 Zvinhu Zvekuita (Uye 4 KUSAITA)
Kudanana idanho rinotyisa panguva dzakanakisa, handiti?
Tsinga, mabhatafurayi, kunakidzwa. Pfungwa dzinomhanya mumusoro mako uye nemanzwiro ari kurovera nemuviri wako.
Iye zvino fungidzira kuti iwe unonetseka nekuremara kunetseka. Iwe unofunga zvakanyanya kuomarara uye kupokana sei?
Dzose idzodzo pfungwa nemanzwiro zvakashanduka kusvika kuma max… uyezve zvimwe.
Zvakanaka, kana iwe uri kufambidzana nemumwe munhu ane kunetseka, iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekugadzirisa nazvo.
Uye iwe unofanirwa kudzidza nekukurumidza.
Ipapo chete ndipo paunogona kupa hukama mukana wakanakisa wekukura kuva chimwe chinhuzve.
Wako mumwe mudiwa angangodaro aifanira kurwa nemadhimoni akasiyana siyana kuti asvike pauri mese ikozvino. Saka uyu munhu akakodzera iwe rukudzo uye kuyemura.
maitiro ekuita kuti mukomana wako akuremekedze
Zviitiko zvavo nemaonero ndeega zvega. Kushushikana kwavo zvakare. Maitiro avari kuzviita uye izvo zvavanofanirwa kudzivirira kuti vachengetedze zvinhu zvakadzikama uye zvine runyararo ingangoita maitiro avakashanda pamusoro pemakore akati wandei.
Saka kunyangwe ichi chinyorwa chichiedza kukupa iwe - mudiwa - pfupiso yakazara yekuti ungaita sei hukama uhwu zvakasiyana kune vamwe munguva yako yakapfuura, mumwe wako mutsva angave aine zvavanoda uye zvavanofarira.
Saka ziva izvi mupfungwa kana uchishandisa zvaunodzidza pano nhasi.
Nezvose izvi zvichitaurwa, ndezvipi zvimwe zvakanaka zvekuita, uye zvekusaita, kana uchidanana nemunhu anogara nekushushikana?
1. Ita Bvunza Mibvunzo Uye Gadzira Kunzwisisa
Sezvatakambotaura, kushushikana chiitiko chakasimba chega.
Kuverenga zvinyorwa kuti uwane zivo yakajairika nezve mamiriro acho kunobatsira, asi hazvigone kupa mhinduro idzo munhu anofanira kunge achizvipa ivo pachavo.
Nekudaro, hurukuro yakavhurika inosanganisira yakawanda mibvunzo ichabatsira kutsetsenura ruzivo rwewe iwe nemumwe wako.
Nguva yakanakisa yekubvunza mibvunzo ndeye kana ivo vari mune vasina kwavakarerekera, kudzikama kwepfungwa nzvimbo.
Mibvunzo yakanaka yekubvunza inosanganisira…
Chii chandingaite kuti ndikubatsire kana kushushikana kwako kuri kuita?
Chii chandingaite kuti nzira yekukuziva iwe ive nyore kwauri?
Pane chero chinhu chandinofanira kuziva nezvacho chingakubatsire kana kukukuvadza?
Pane chero chinhu chaunofunga kuti ndinofanira kuziva?
Mumwe wako anogona kuzviwana zvakaoma kutaura nezve kushushikana kwavo, kunyanya sezvo iwe uchiri kuzivana. Saka usatundire zvakanyanya ipapo ipapo.
Haufanire kudzidza zvese zviripo kuti udzidze nezve kushushikana kwavo mune imwe nzira, sekunge iwe haufanire kudzidza zvese zviripo kuziva nezve mumwe munhu asina kunetseka mune imwe nzira.
Kana iwe haungakwanise.
Hukama hunopa iyo kubatana kwechokwadi tora nguva - uye icho ichokwadi zvisinei kuti mumwe munhu anotambura nehutano hwepfungwa.
Asi usatarisira pasi simba rekucherechedza zvakare. Vanogona kusakwanisa kuisa zvese mumazwi iwe aunokwanisa kunzwisisa, saka kutarisa maitiro uye maitiro kune zvimwe zvinhu ndiyo imwe nzira yakakosha yekudzidza nezve mamiriro avo.
Dzidza yavo yemuviri mutauro uye kumeso kumeso mune akasiyana mamiriro. Izvi zvinokubatsira iwe kuona kuti vangave vachinzwa sei uye, nekudaro, kuti ungapindure zvakadii.
Cherekedza mamiriro ezvinhu anoita seanokonzera kushushikana kwavo uye edza kudzivisa. Pamwe vanovenga mhomho kana zvifambiso zvevoruzhinji kana mabhawa ane ruzha.
Rangarira chidzidzo chikuru chechikamu chino - bvunza mibvunzo. Kana iwe uchifunga kuti havana kugadzikana, mira kusvikira vawana kudzikama kwavo zvakare uye uvabvunze kana zvawacherekedza zvaive zvechokwadi.
Cherekedza, asi tarisa. Usafungidzira zvinhu (isu tichataura zvakawanda nezve izvi gare gare).
Paunowedzera kusvika pakuvaziva uye nekushushikana kwavo, ndipo pavanonzwa kugadzikana pavanonzwa paunenge wakakukomberedza. Vanozonzwa sekunge iwe waita nhamburiko yekuvanzwisisa uye kuti vanogona kuve ivo pachavo vakakukomberedza.
2. IVA Iva Nemwoyo Murefu Uye Dzidza Papi Paunotora Nhanho Kudzoka
Mwoyo murefu hunhu hwakakosha nekuti pachave nenguva apo kumirira ndiyo yega sarudzo.
Kuzvidya mwoyo kunogona dzimwe nguva kukanganiswa nenzira dzakasiyana, uye dzimwe nguva kwete. Dzimwe nguva zvese zvatingaite kumirira kuti nguva yekuzvidya mwoyo ipfuure.
kana mukomana angori kwete izvo mukati mako
Vanhu kazhinji vane ichi chidanho chekuita chimwe chinhu kuyedza kugadzirisa dambudziko ravanoona.
Ramba muyedzo uyu.
Nzwisisa kuti kushushikana hakugone kurapwa. Zvinogona chete vakakwanisa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana kana nerubatsiro rwemishonga.
Usamhanyire mukati pachiratidzo chekutanga chekufunganya kuchengetedza zuva. Mumwe wako anoziva chiitiko ichi zvirinani kupfuura chero munhu uye iwe unomhanyisa njodzi yekuita kuti zvinhu zviwedzere kana iwe uchifunga kuti iwe unoziva zvirinani nekuti iwe waverenga ichi chinyorwa (kana chero chimwe chinhu cheicho chinhu).
Zvingave zvakaoma kupupura uye unganzwa uchimanikidzwa kubatsira neimwe nzira, asi chinhu chakanakisa chaungaite kuvapo navo.
Ipa rubatsiro kana wakumbirwa, asi chete kana wakumbirwa.
Kushivirira kunobatsirawo kana mumwe wako achida kuvimbiswa. Nekuti ivo vachazviita. Pamwe kazhinji, uye kunyanya pakutanga.
Kuzvidya mwoyo kunogona kukonzera kuti munhu agare pazviitiko zvakaipisisa, kunyangwe zvinhu pazviri kufamba zvakanaka. Saka kana uchinyatsoda munhu uyu uye uchinyatsoda kuva navo, haufunge kuvaudza izvo zvakare uye zvakare kurerutsa zvinovanetsa.
3. Ita Uchikurumidza Uye Kutaurirana Zvakajeka
Munharaunda umo kuburitsa mweya, kukwevera zvinhu kunze, uye kudzivirira chero chinhu chakaoma kuri kuramba kuchinyanya kuwanda, zvishoma zvekukurumidza zvinogona kubatsira chaizvo munhu ane kushushikana kuti arambe akasimba.
Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kugara wakaroora kune yako smartphone kana kuve pane iyo beck uye kufona yeumwe wako mutsva mudiwa. Iko kune zviyero zvekurova kudzivirira kunzvenga mutsetse mukuita unodzvinyirira kana kudzora maitiro.
Izvo zvinongova zvinhu zvakapusa sekudzorera runhare kana meseji meseji, kufanoronga-kuronga uye kusimbisa chiitiko, kana meseji kana kumhanyisa nguva kunogona kuita mutsauko mukuru nekuratidzira kufunga.
Kubvisa zvisingazivikanwe uye misiyano ine mukana wekuenda zvisirizvo kunoita kuti munhu ane kushushikana azorodze zvakanyanya.
Zvekare, paunowedzera kunzwisisa kushushikana kwavo, ndipo paunonyanya kukwanisa kuita nenzira dzinobatsira kudzivirira kana kurerutsa zvakashata zvacho.
4. ITA Kudzidzira Kuchengetedza Kudzikama Mumamiriro Ekuyedza
Kushushikana kusagadzikana kunogona kuburitsa yakawanda manzwiro akasiyana, anosanganisira kutsamwa kana kuvengana izvo hazvireve kuti zvine musoro mune mamiriro ezvinhu.
Kukanda kutsamwa kumashure kumunhu ari kushanda munzira yake kuburikidza nekurwiswa kwekushushikana kunoita chete kuti zvinhu zviwedzere.
Saka kupokana kwako (uye kunogona kuva kunetsekana chaiko dzimwe nguva) kusangana nehasha dzemumwe wako kana kuvengana nehunhu hwakadzikama.
Uku hakusiko kuita kwomuzvarirwo uko vanhu vazhinjisa vanako. Vanhu vazhinji vanopindura kutsamwa nehasha, kunyanya kana vachinzwa kurwiswa.
Zvakanaka, mumwe wako anogona kutaura kana kuita zvinhu zvinokurwadzisa kana kushushikana kwavo kukwira. Zvinhu izvo zvavanenge vasingareve chaizvo.
Kuzvidya mwoyo haisi pembedzo kune vakadaro hutsinye kana hunhu hunoreva , asi inogona kuve chikonzero chazvo. Sezvo zvingave zvakaoma, kuyedza kuenzanisa kurwisa kwavo pauri panguva yechiitiko chekushushikana ndiyo imwe nzira yekurerutsa manzwiro ainoita pauri.
Iwe unofanirwa kuzviudza iwe kuti uku ndiko kushushikana kwavo kutaura kuburikidza navo. Haasi akadzikama, ane rudo munhu wauri kufambidzana naye anoda kukukuvadza.
Izvi zvinouya nebakoat: kushungurudzwa hachisi chinhu chinofanirwa kubhenekerwa pamusoro kana kuregererwa.
Iko hakuna chikonzero chekuve chero munhu ane manzwiro ekubaya bhegi bhegi. Kana iwe usina chokwadi nemamiriro ezvinhu kana hukama hwawakazviwana urimo, chinhu chakanakisa chaungaite kushanyira chipangamazano uye kuwana kwazvakarerekera, wechitatu-bato pfungwa.
Izvo zvataurwa, hapana akakwana. Pachave nenguva dzakaomarara dzekufamba. Ndozvazviri chete muhukama nemunhu ane chirwere chepfungwa.
Yakakwira-Inoshanda Kushushikana Kunopfuura Zvaunofunga Kuti Ndizvozvo
Nzira Nomwe Vanhu Vane Kunze-Kushanda Kunetseka Kuvanza Mamiriro Avo
8 Zvinhu Zvaunoita Nekuda Kwekufunganya Kwako (Izvo Vamwe Vari Mapofu Kune)
20 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Usati Kudanana Nemusikana Anofunga Zvakawanda
Iyo Yemagariro Yakanetseka Yemunhu Dhairekita Kufambidzana
Uye zvakadiniko nemaDON'Ts?
winnie the pooh ndatenda makotesheni
1. HAUFANIRI Kufungidzira Kusagadzikana Kwese Kushushikana Kunobva Mukufunganya
Haasi ese manzwiro akashata anobva mukufunganya kwemunhu. Zvakajairika kuti vanhu vasina chirwere chepfungwa vafunge kuti kushushikana kwese mumunhu anorwara nepfungwa kunobva mukunetseka nehurwere hwepfungwa.
Icho hachisi chokwadi.
Vanhu vane kushushikana vachiri vanhu. Dzimwe nguva kune zvakashata manzwiro, zviito, kana zviitiko zvinogona kukonzerwa nesarudzo dzisina kunaka, mazuva akaipa, kana kushungurudzika kwakawanda.
Kufunga kuti chirwere chepfungwa chinogara chiri pamudzi wemanzwiro epamutemo inzira yemoto yekuvaka chigumbu uye kuvhara kutaurirana.
Uye sezvatakakurukura pakutanga, kutaurirana kwakakosha kuti unzwisise kushushikana kwemumwe wako uye maitiro avo angave kana angave asina hukama nazvo.
Kana iwe ukawedzera iwo ese manzwiro seakadzika midzi mukushushikana kwavo, unokanganisa manzwiro avangave vachinzwa. Uye izvi zvinogona kutyaira wedge pakati pako.
Saka usamhanyira kumhedziso nezvekuti kushushikana kuri rini uye kusiri kutamba chinzvimbo mumaitiro emumwe wako.
2. USATore Zvinhu Pachako
Takabata izvi zvisati zvaitika, asi zvakakosha kudzokorora. Mumwe wako anogona, pane imwe nguva, kupopota kwauri nekuda kwekushushikana kwavo.
Iwe haugone kudzora kuti riini kana kuti sei izvi zvichaitika, asi zvakakodzera kuti uzvigadzirire.
Vanhu vanowanzo funga kugona kwepfungwa uye kutonga zviri zvakachena, zvakarongeka zvinhu. Havasi ivo.
Dzimwe nguva zvinhu zvinomira kunze kwekudzora. Dzimwe nguva matekinoroji akadzidziswa pakurapa haashande. Dzimwe nguva mishonga inopera, kana kuti inguva yekuchinja muyero. Kune zvikonzero zvakawanda nei zvinhu zvichigona kuenda zvakashata.
Saka, kugona kusatora zvinhu pachako hunyanzvi hwakakosha kuva nahwo kana paine mazwi makukutu kana zviito zvisina mubvunzo.
Iwe unogona kunge uri wekutarisa kwehasha yavo yekushungurudzika nekuda kwekuti iwe ndiwe uripo navo panguva yazvinorova.
Zvichida hausi iwe vakatsamwira, kunyangwe zvikaita sekudaro pavanenge vachisheedzera kana kutaura zvinokutsvinyira.
Edza kuona kuputika uku semunhu asingafadzi anofamba muhukama hwako - mwana anotsamwisa ari pachigaro chekumashure kwemota anokuchema nekukuwomera dzimwe nguva.
Haungape mwana sitiringi, saka usatendera kuputika kweumwe wako kutyaira zvinhu futi.
Mubvunzo uri pachena ndewokuti: 'Unogumira papi?'
Mutsara unodhonzwa pese paunosarudza kuidhonza. Vamwe vanhu vane kugona kudzora zvinhu kureruka vamwe havaiti.
Iko hakuna mhinduro isiriyo kumubvunzo iwoyo nekuti munhu wese akasiyana. Kana iwe uchinzwa kuti haugone kurarama kana kushushikana kuchirova mumwe wako, hapana chinonyadzisa kuzvibvuma kwavari uye kupedza zvinhu nerunyararo.
3. USATAURA Kugadzirisa Mumwe Wako
Vakawandisa vanhu vanofunga kuti rudo rwavo kana tsitsi dzichakunda nekugadzirisa chirwere chepfungwa chomumwe, kushushikana kana zvimwewo.
Izvi zvinoshamisa kure kure nechokwadi.
Mumwe chete ndiye anogona kuzvigadzirisa. Iko hakuna chikuru, chakakosha chokwadi mukuyedza kuwedzera kunzwisisa uye rudo kune munhu ane chirwere chepfungwa.
Ivo ndivo vanofanirwa kudzidza nezve kwavo kurwara nepfungwa, kudzidza maitiro ekuzvibata, uye kunyatso shandisa izvo zvavanodzidza kusundira mukugadzikana uye kutonga.
Hapana mumwe munhu anogona kuzviita. Zvakanakisa zvaunogona kuita kupa kukurudzira uye kutsigira zvavanoita.
Chii chimwe, kana uri akazvipira zvechokwadi kuhukama , rudo rwako harufanirwe kupihwa pamamiriro ekuti vanogona kupodza kushushikana kwavo.
Kana iwe uchizofambidzana nemumwe munhu ane kusagadzikana, iwe unofanirwa kubvuma kuti ivo vangango gara vaine imwe nhanho yekuzvidya mwoyo, kunyangwe kana ivo vachigona kudzidza kuzvibata.
Sezvo zvausingade kuti vakubvunze kuti uchinje, havadi kuti ubvunze kana kutarisira kuti vachinje.
Ivo vanoziva zvakazara kuti kushushikana kwavo kunonetsa kurarama navo - vanogara nayo mazuva ese. Vachaita zvese zvavanogona kuti vadzikise kukanganisika kwazvinoita pahukama hwenyu, asi iwe unofanirwa kubvuma kuti zvichaitira dzimwe nguva dzakaoma.
4. USANZWE Tsitsi Kana Kutarisa Pasi Pamwe Wako
Tsitsi chinhu chakakosha chezviitiko zvevanhu. Tsitsi kune mumwe munhu dambudziko kana matambudziko muhupenyu anogona kuratidza kudziya uye kufambisa kupora.
Tsitsi, zvisinei, chinhu chinonetsa. Tsitsi dzinotungamira mukugonesa, nekubira munhu muridzi wezvinetso zvavo.
Iwe unogona zvirokwazvo kunzwa zvakashata kune mumwe munhu ari kutarisana nedambudziko, ungave uri kufambidzana nemumwe munhu ane kunetseka ari kunetseka panguva yakaoma, kana imwewo nyaya yakaoma.
Asi ipapo zvirokwazvo inoda kuve miganhu nemiganhu .
Chinhu chinosetsa nezvazvo ndechekuti vanhu vane shungu nezve kudzora kurwara kwavo kwepfungwa kana kupora kubva mumatambudziko avo havawanzoda tsitsi.
Chavanowanzoda kutsigira kana kunzwisisa, nekuti kune vanhu vazhinji vasingade kunzwisisa, vanonyangarika kana paine zvishoma zvishoma zvekuomerwa.
Ungaudza sei musiyano? Tarisa kuedza.
Vari kuedza here? Ivo vanochengeta chiremba wavo kana kurapa kugadzwa? Vanotora mishonga yavo, kana iripo?
Vanoedza kutaurirana pavanokwanisa? Vanoedza kukubatsira kuti unzwisise here? Ivo vanotora mutoro wezvavanokanganisa kana kukuvadza kwavanokonzera?
Izvo zvakakodzera kuti umire padivi pemumwe munhu ari kuedza. Asi kana vasiri? Zvakanaka, saka vane imwe nzira yekufamba parwendo rwavo pachavo.
sei kutamba nesimba kuti uwane pamusoro pezvinyorwa
Uye iwe unofanirwa kunyatso kuyera kuti kana kwete iwe unoda kuunza kuoma kwemunhu ane kusagadzikana kunetseka muhupenyu hwako.
kunyora tsamba yerudo kwaari
kusaina mukomana anofarira asi anotya
maitiro ekuita kuti nguva iite kunge inokurumidza
zvekuita kana wafinhwa newe
maitiro ekuudza kana waunoshanda naye achifarira
su yung uye akapfuma swann
mutsauko pakati pekuita rudo nekubatana